Waa mid ka mid ah dhaqanka ugu badan si ay u daawadaan videos on qalab mobile maalmahan. Sida laga soo xigtay caansiirisay ee saadaasha suuqa (2014), shixnaddaas oo ka mid ah telefoonada gacanta kor u kici doono ugu yaraan 7.5% ilaa 2,47 billion unugyada ee 2014 (oo ku salaysan 2.3 billion unugyada diiwaan 2013). Nooca Qalabka telefoonada gacanta ka mid ah kumbiyuutarada (computer oo laptop), kiniiniga, telefoonada gacanta iyo sidoo kale ultramobiles kale. Taasi waa mid aan aad u fog ka dambeeya tirada dadka isticmaalaya Internet dunida oo dhan qiyaastii 2.7 bilyan oo sanadkii 2013, kuwaas oo matala 38% dadka adduunka ee (ITC, 2013).
Isticmaalayaasha Internet Worldwide
In la barbardhigo in koritaanka tirada dadka, tirada dadka isticmaalaya Internet ayaa si dhab ah u labeeyay ama saddex laab ka badan sano ee lasoo dhaafay. Arrin kale ayaa sidoo dardar ah aggresive lagu arkay qaybaha mobile iyo waxa uu lagu wado inta badan ay suuqyada soo baxaya.
Tirada guud ee dadka: 7.1 bilyan
Wadarta dadka isticmaala Internet: 2.7 bilyan
Shixnaddaas Total ee Qalabka telefoonada gacanta, 2.3 billion
Tirada Times waa 4.2% kaliya ka danbeeya tirada guud iyo tan waxaa la filayaa in ay sameeyaan sano ayaa ka gees inuu yimaado. Taasi waa sababta ugu waynina ay saturation suuqa, ku dheehan yahay dadaalada wax lays ay ku sii approching 100%. Heerka hadda ee lays caalamiga ah ee lays mobile-gacanta waa 96%.
Total mobile-celullar Times: 6.8 bilyan
Xidhid ugu weyn: Asia Pacific @ 3.5 bilyan
Iibka casriga ah ee Global: 967,7 milyan oo unugyo
Statistics kale ee Global
Access Internet: Qoyska la / aan heli Internet ee labada dal horumaray iyo kuwa soo koraya.
Casriga ah ee Iibka: Sales by iibiya / saarayaasha si loo soo afjaro-users.
Faraqa Jinsiga: Boqolleyda dadka isticmaala Internet (by farqiga dheddig).
Maxaad Daawo Videos on telefoonnada gacanta?
Kharashka videos daawashada on a
qalab mobile (sida iPhone ama ipad)
waa hubaal in ka badan la awoodi karo ka badan
si ay u iibsadaan ah TV-qeexidda sare,
sanduuqa geeyo ama ciyaaryahan.
Qaadashada telefoonka gacanta ama kiniin ah waxaa
badan lagu shido marka la barbar dhigo laptop ah.
Marka laga reebo in, aad ficil awooddo
waxa ay ka qaadaan on go la kaliya cable USB ah
ama pack batari dibadda.
Xiriir A internetka waa in aad oo dhan
u baahan tahay in si aad u daawato videos on awood aad
Qalabka telefoonada gacanta. Waxa kale oo aad sidoo kale u isticmaali kartaa
ee xogta WiFi ama mobile qorsheeyo si aad u daawato
iyo sidoo kale wadaagaan videos ah.
Popular Online / Streaming Goobaha
Waxaan mar dambe kumyadu in TV ee daawashada cajaladaha maadaama ay jiraan kala doorashooyin badan oo online. Inta badan goobaha internetka ama geeyo bixisaa videos at kharashka ku jirin innaba. Waa asal ahaan madadaalo u BILAASH. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad qori lacag bil kasta haddii aad raadineyso weeyna u helaan aan xad lahayn oo dhan ku files multimedia. Fiiri qaar ka mid ah goobaha hoos ku taxan ama isku dayaan goobaha kale online / geeyo caan ah .
Inta badan ama aqlabiyadda tirada guud ee online goobaha caanka ah / hoorto waxay leeyihiin ay app mobile aad u gaarka ah iyo si rasmi ah u download. Haddii aad tahay, si kastaba ha ahaatee, raadinayso barnaamijyadooda ciyaaryahan video dheeraad ah oo bixiya dabacsanaan kala duwan ama kordhay ee loo maqli karo, waxaa hubaal ah ayaa in badan uu ka soo xusho. Si fudud dhirtuba iyada oo kala duwan doorasho ee xisbiga saddexaad ama ciyaaryahan video barnaamijyadooda dibadda la heli karo.
> Resource > Video > Watch Videos on Qalabka telefoonada gacanta (macruufka & Android)